saa'idka rullaluistemadka tapered - Shiinaha Anrui Holding Group
saa'idka 6312RZ Motor
6213black (2) saa'idka Motor
saa'idka 6206RZ Motor
saa'idka qalabka 6206RZ1 Qoyska
saa'idka rullaluistemadka tapered inta badan dhali radial radial ku salaysan iyo axial xamuulka isku daro. load Axial waday awooda ee isku xigta hal saa'idka rullaluistemadka tapered ku xiran tahay xagal xiriir, in uu yahay, xagal ee giraanta dibadda raceway, weyn xagal weyn waagii saa'idka rullaluistemadka capacity.Tapered awood inuu qaado load axial in hal jiho iyo in la xadido axial barakaca ee usheeda dhexe iyo guryaha in hal jiho. Marka la barbar dhigo xiriirka kubada saa'idka angular, saa'idka rullaluistemadka awood loading tapered ...
saa'idka rullaluistemadka tapered inta badan dhali radial radial ku salaysan iyo axial xamuulka isku daro. load Axial waday awooda ee isku xigta hal saa'idka rullaluistemadka tapered ku xiran tahay xagal xiriir, in uu yahay, xagal ee giraanta dibadda raceway, weyn xagal weyn waagii saa'idka rullaluistemadka capacity.Tapered awood inuu qaado load axial in hal jiho iyo in la xadido axial barakaca ee usheeda dhexe iyo guryaha in hal jiho. Marka la barbar dhigo xiriirka kubada saa'idka angular, kartida saa'idka rullaluistemadka tapered loading waa weyn, la yareeyo xawaaraha waa yar yahay. saa'idka rullaluistemadka tapered hubkaas ayaa loo isticmaalaa in baabuurta, diidanaa dhagaxshiidka, macdanta, metallurgy, mashiinada caag iyo warshadaha kale.
dhalista Normal Load aasaasiga ah factor Xaddididda Ball sita
Cabirka Qiimeynta xawaaraha dhammaystir miisaanka
d D B, C Cr Korintos fo Gresse Oil No. size miisaanka
aasaasiga ah mm mm mm Kn Kn rpm rpm mm kg
: Previous saa'idka kale kartoo
Next: saa'idka 8AT1 Automobile
Gardening Tool saa'idka Factory
Gardening Tool saa'idka Manufacturer
Gardening Tool saa'idka qeybiye
meeraha 8AT usheeda dhexe pinion
6909 saa'idka kale habka
8AT 3008 xigta Double xiriir angular kubada dhalista
8AT usheeda dhexe pinion meeraha -1
6808 saa'idka kale habka